Nseta nke Omnichannel Ndị Ahịa Buzụ Àgwà | Martech Zone
Omnichannel azum na-abụwanye ihe a na-ahụkarị iji mejuputa ka ndị na-eweta igwe ojii na-ere ahịa na-enye mmekọrịta siri ike na mmụba nke usoro gafee njem ndị ahịa. Ndepụta njikọ na kuki na-eme ka ahụmịhe na-enweghị ntụpọ ebe, n'agbanyeghị agbanye ọwa ahụ, ikpo okwu nwere ike ịmata ebe onye na-azụ ya nọ ma kwalite ozi ahịa dị mkpa, metụtara ọwa ahụ, ma duru ha gaa zụọ.
Gịnị bụ Omnichannel?
Mgbe anyị na-ekwu maka ọwa n'ahịa, anyị na-ekwu maka ọwa ahịa a na-emeghe iji gwa ndị ahịa ma ọ bụ ndị ahịa ihe. Nke a nwere ike ịgụnye ọwa ọdịnala dịka mgbasa ozi telivishọn, mgbasa ozi mbipụta, ma ọ bụ redio. Dijitalụ dijitalụ gụnyere nchọta ihe, mgbasa ozi mmekọrịta, mgbasa ozi akwụ ụgwọ, ahịa mkpanaka, na usoro ndị ọzọ.
Multi-ọwa retailing anọwo ebe multi-ọwa anọwo na. Na mgbọrọgwụ ya, ọtụtụ ọwa ahịa na-ezo aka na mgbasa ozi ezubere iche na onye na-azụ ma ọ bụ azụmahịa na ihe karịrị otu ọwa. Ga-agba ọsọ mgbasa ozi oge niile gafee usoro na usoro iji nweta ma duzie atụmanya ịzụta.
Omnichannel na-ezo aka na ahụmịhe cross-channel nke ị na-eji mee ka onye na-azụ ya zụta. Ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ iji bulite ahụmịhe site na ngwa, usoro, na mmekọrịta na-eduzi ndị na-azụ ahịa. Ha nwere ike ịmalite site na nyocha ọchụchọ ala, gaa na saịtị, wee nweta mgbasa ozi na-echegharị ugboro ugboro na-ebugharị ụlọ na-ejedebe na ndị na-azụ ahịa na-eleta ebe ahịa.
Ndị na-eri ihe anaghị azaghachi na atụmatụ omnichannel, ha na-atụ anya na enweghi ahụmịhe na-enweghị nhịahụ n'etiti saịtị e-azụmahịa na ebe mgbere kacha nso ha.
Omnichannel umzụ Àgwà
BigCommerce.com mepụtara ihe omuma ihe omuma banyere omumu omnihannel na ebe a ihe ndi ozo:
58% nke ndị ahịa na-egbochi site na mbupu ọnụahịa
49% nke ndị na-azụ ahịa anaghị azụta ntanetị n'ihi na ha enweghị ike imetụ ma nyochaa ngwaahịa
34% nke ndị na-azụ ahịa n’ onlinentanet enweghị ike ichere oge nnyefe - agbanyeghị etu ha dị ọsịsọ!
34% nke ndị zaghachirinụ kwuru usoro nloghachi siri ike maka ngwongwo ha zụrụ
29% nke ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ ịzụta na ọnọdụ brik na-mortar n'ihi nchegbu nzuzo
Olee otu anyi si azuta: Omume nke ndi ahia nke oge a na World Omni-Channel
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ BigCommerce.com
Tags: BigCommercebrik-na-mortaromume ịzụ ahịa ịzụ ahịaoge nnyefeecommerceinfographicomni-ọwaomnichannelOmumu ihe omumuonline ịzụtaịzụ ahịa n'ịntanetịnchegbu nzuzozụọ ngwaahịaretaillaghachi usoroalaghachiụgwọ mbupu